(tonga teto avy amin'ny Fiteny Indô-Eorôpeanina)
Ny fiteny indô-eorôpeanina dia fianakaviam-piteny ivondronan'ny fiteny maro any Eorôpa sy any India ary any Iràna sy ny manodidina, tenenina eran'izao tontolo izao. Misy 1 000 eo ny isan'ny fiteny ao amin'io fianakaviam-piteny io. Misy olona 3 lavitrisa no miteny amin'ny fiteny indô-eorôpeanina. Fianakaviam-piteny tenenina maneran-tany ny maro amin' izy ireo, izay ahitana ny fiteny albaney, ny fiteny armeniana, ny vondrom-piteny balto-slava, keltika, jermanika, helenika, indô-iraniana, italika (isan'izany ireo fiteny rômana), ary vondrom-piteny maty roa, dia ny vondrom-piteny anatôliana (isan'izany ny fiteny hitita) sy ny vondrom-piteny tôkariana. Ankehitriny dia misy 6 tapitrisa ny olona miteny indô-eorôpeanina.
1 Vondrona ao amin'ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana
Vondrona ao amin'ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana[hanova | hanova ny fango]
Ny vondrom-piteny anatôliana dia ahitana ireo fiteny maty notenenina tao Anatôlia tamin'ny Andro Taloha toy ny fiteny hitita, fiteny lovita, fiteny palaita, fiteny lidiana, fiteny likiana, fiteny miliana, fiteny kariana, fiteny sidetika ary ny fiteny pisidiana.
Ny vondrom-piteny tôkariana na agni-kotsy dia ahitana ireo fiteny maty telo, dia ny fiteny agneana sy ny fiteny kotseana ary ny fiteny kroraniana, izay notetenina tao amin'ny lemak'i Tarima tamin'ny taonarivo voalohany taor. J.K., ao atsimion'ny faritra mizakatenan'i Xinjiang any Sina.
Fiteny iranika: isan'izy ireo ny fiteny avestika, ny fiteny persiana taloha, ny fiteny iraniana antenantenany, ny fiteny persana vaovao, ny fiteny pastô (ao Afghanistàna), ny fiteny korda, ny fiteny balotsy, ny fiteny skitiana, ny fiteny sarmatiana ary ny fiteny ôsetiana.
Fiteny indô-ariana: isan'ireo ny fiteny sanskrita, ireo fiteny prakrita, ny fiteny hindy, ny fiteny ordo, ny fiteny bengaly, ny fiteny gojaraty, ireo fiteny indiana, ny fiteny nepaly, ny fiteny singaley, ireo fiteny darda (fiteny kasmiry, fiteny romany).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_indô-eorôpeanina&oldid=999746"
Voaova farany tamin'ny 3 Janoary 2021 amin'ny 11:10 ity pejy ity.